ပန်ဒိုရာ: ရောမလိုကျင့်ခြင်းနှင့် ၄င်း၏အစာမကြေမှုများ
(localization and its discontents)
အော့ချတ်မြောင်းထဲမှာ ရေလျှံနေပေါ့ ရေများရာမိုးရွာ
ကယာစူးယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဒီ ဂါးမန်း နဲ့တော့ တွေ့နေကြပြီ
ဒစ်စကောင့်တွေဟာ တန်းစီအမှိုက်ပုံးတွေထဲ စနစ်တကျ နေရာယူနေကြတယ်
မနက်ဖြန်ဟာတနင်္လာ တယ်လီဖုန်းကဒ်တစ်ကဒ် ပန်နင်ဆူလာက ပဲပြုတ်နှစ်ကျပ်ဖိုး
သွားပစ်လိုက် လျှောက်ပစ်လိုက် ဒီလမ်းမတွေဟာ ဒီခြေထောက်နဲ့ ထိုက်တန်တယ်
ဘ၀ဆိုတာ စတားဘတ်ခ်မှာ ဒဘယ်လ်ရှော့ ပဲ ကိုးကုန်းကိုးကျင်း ၀င်းဒိုးရှော့ပင်း ပဲ
ပန်းဆိုးတန်းမှာ ဖုံထူနေမှာ လှည်းတန်းဈေးထဲမှာ ချွေးပြန်နေကြမှာ ငါဘယ်သိမှာလဲ
အမေတစ်ယောက်က လသားလေးကို မိုက်ကရိုဝေ့ဗ် မီးဖိုထဲ ထည့်ဖုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်း
အိတ်ခ်ျဒီဘီ တိုက်ခန်းပေါ်မှာ လူသတ်ပြီး သောက်သုံးရေကန်ထဲ ထည့်ထားလိုက်ကြောင်း
သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေ ၀င်ပြိုင်မယ့်အကြောင်း
(ငါကတော့ ရုံးပိတ်ရက် တစ်ရက် ရမှာကို ပိုစိတ်ဝင်စားနေလေရဲ့ ဟေဟေ့….)
ယာဟူး နဲ့ ဂူဂယ်လ်မှ မကယ်ရင် လူရာဝင်ဖွယ် သတင်းထူးတွေကို သိမှာမဟုတ်တော့ဘူး
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့ ဘလော့ခ်မှ မ၀င်ရင် ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက် ရောက်သွားလိမ့်မယ်
သတင်းအချက်အလက်ဟာ ရေဒီရေးရှင်းလို ပြန့်တယ် နားစွင့်ထားကြ
တစ်ကျပ်ရှိရင် စာရွက်သားကောင်းကောင်းနဲ့ သတင်းစာတွေ တပုံကြီးရမယ်
အထက်လူကြီးရှေ့မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်နေကြောင်း အားကစားကျင့်ပြ
တင်းနစ်ဆိုရင် တင်းနစ် ဂေါ့ဖ်ဆိုဂေါ့ဖ်
လမ်းလျှောက်ရင် လမ်းလျှောက်ဝတ်စုံ တသွေမသိမ်း
ဒူးနေရာဒူး တော်နေရာတော် သောကြာနေ့ဆို လျှော့ဝတ်ကြ
ကိုယ့်ဘာသာဆိုရင် လျှော့စားအဆီကျ ဘူဖေးအချိန်မှာတော့ တန်အောင်စား
limited land - unlimited space
သင့်ဦးနှောက်တွင်းမှာ နေရာနည်းနည်း ချန်ထားပါ
အပြည့် ဖြည့်လိုက်ရင် ခွက်ထဲမှာ ဘာမှထပ်ထည့်လို့မရတော့ဘူး ဇင်တရားအရ
အမြန်ရထားဟာ ခပ်နှေးနှေးသွားနေတယ် ငါ့စိတ်အလျဉ်ကို ဘယ်မီပါ့မလဲ
ဗိသုကာလက်ရာများရဲ့ အသည်းနှလုံး ခရီးသွားလာရေးရဲ့ အချက်အချာ
အာရှစီးပွား စုစည်းရာ အနုပညာတို့ရဲ့ ဆုံမှတ်
ဟောဒီကျွန်းရဲ့ အောက်တည့်တည့်မှာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဗဟိုချက်ရှိတယ် (ယုံလား)
မာလိုင်းရင်းသတ္တ၀ါဟာ လောကအလုံးကို စောင့်ကြပ်တယ်
စန်တိုစာဟာ နိဗ္ဗာန်ဘုံ ကိုပီတီယံဟာ နတ်သုဒ္ဒာ
ရထားသံလမ်းနဲ့ တိုက်မြင့်မြင့်တွေဟာ ဘ၀ရဲ့ထွက်ပေါက်
ပြီးပြည့်စုံချင်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို ချစ်ခြင်းတရားက လာစိန်ခေါ်တယ်
ငါဟာ သူ့မြေကိုနင်း သူ့ဆန်ကိုစားပြီး
သူမရဲ့ ရွှေရောင်ဆံပင်နီကျင်ကျင်တွေကို ရဲရဲရင့်ရင့် ရှိုက်နမ်းပစ်လိုက်တယ်
မရိန္နာမှာ လတစ်ခြမ်း ခပ်ပြာပြာ သာနေတယ်
မြို့ပြဟာ အပြားလိုက် မာတောင့်တောင့် လေးထောင့်စပ်စပ်နဲ့
ဖုံးမရဖိမရ မားမားမတ်မတ် မိုးတိုးမတ်တတ်ကြီး ရပ်နေတယ်
သူရဲကောင်းကြီး ဒွန်ကွီးစုတ် ဗြုန်းဆိုဝင်လာ မကောင်းသူပယ်ကောင်းသူကယ်
လက်ခုပ်သံတွေ သောသောညံသွား ဓားရှည်တစ်လက်ရဲ့ လှောင်ပြောင်မှု
ပြည်သူများ ဘာကို လိုချင်သလဲ ဘာကို လိုချင်သင့်သလဲ
သင်တို့ ဘာသိသင့်သလဲဆိုတာကို ကျွန်ုပ်တို့က သိနှင့်နေတယ်
ဒူးရင်းသီး အနုပညာတိုက်ဟာ စူးစူးဝါးဝါး လှနေသလို
ပန်နင်ဆူလာ ကုန်တိုက်မှာ စူးစူးဝါးဝါး အနံ့တွေ ထွက်နေတယ်
ညနေခြောက်နာရီမှာ ဆရာတော်တရားပွဲရှိတယ် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ
အီးမေးလ်တစ်စောင်နဲ့ ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခု RSVP အကြောင်းပြန်ရန် လို/မလို
ဟေ့ နားမလည်ဘူးလား ငါ့တရားဟာ ငါ့ကဗျာ ငါ့အဘိဓမ္မာဟာ ငါ့ကဗျာ
ငါ့ကျင့်စဉ် ငါ့ယောဂ ငါ့ပယောဂဟာ ငါ့ကဗျာ
နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ/ခုနစ်ရက် per second billing, non-stop
ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာအတွင်း ထိန်ထိန်သာနေတဲ့ မီးရောင်တွေကြား
အော့ချတ် = Orchard
ကယာစူး = Kiasu = fear of losing
ဂါးမန်း= gahmen = government
ပန်နင်ဆူလာ = peninsula plaza (မြန်မာများ ကျက်စားရာ)
အိတ်ခ်ျဒီဘီ တိုက်ခန်း = HDB flat = အစိုးရ ရောင်းချသော တိုက်ခန်း
limited land - unlimited space = SLA (အစိုးရမြေစာရင်းဌာန) ၏ ဆောင်ပုဒ်
မာလိုင်းရင်း = merlion
စန်တိုစာ = sentosa
ကိုပီတီယံ = kopitiam (စားသောက်ဆိုင်တန်း နာမည်)
Posted by pandora at 5:48 PM
“ဒစ်စကောင့်တွေဟာ တန်းစီအမှိုက်ပုံးတွေထဲ စနစ်တကျ နေရာယူနေကြတယ်“ မှန်လိုက်တာ...။
အစာမကြေဘူးဆိုလို့ အစာကြေလျှက်ဆားများ ယူမလား
ဘယ်တော့သိမှာလဲလို့ မေးမိတာ အခါခါပါ
လူရာမ၀င်တဲ့ ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်ရောက်နေသူ တယောက်
ရောမမှာ ရောမလိုကျင့်ရင်း ရောမနဲ့ နေသားက မကျမကျနိုင်သေးဘူး... အစာမကြေ ရင်ကယ်နဲ့နေမကောင်းဘူးပန်ရယ်... ဒီကဗျာလေးနဲ့ အတူ မျောပါတော့ အင်း... နေသာထိုင်သာတော့ ရှိသွားသလိုပဲ...
ပန်ပန်ခုတလော ကဗျာတွေ တယ်ထွက်နေပါလား။
စလုံးဝေါဟာရ ခက်ဆစ်တွေရေးမပြထားရင် မမေကတော့ နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။
စပိုက်စီတွေများရင်လဲ အစာမကြေဖြစ်တတ်တယ် နော်။
ဒါကြောင့် အစာမကြေရခြင်း အကြောင်းရင်းကို စစ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ကြောင့်၊ သူ့ကြောင့်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်တွေပါပဲ။
မမေကတော့ အစာစားပြီးတိုင်း လျက်ဆားလေး လျက်တယ်။ :)
ဟစ်ဟော့ လိုမျိုး ဆိုကြည့်လိုက်တယ်...။
အင်း ဒီကဗျာလေး တော့ သိသလိုလိုဘဲ
ရောမရောက်နေမှတော့ ရောမလို ကျင့်…
ခက်သထက် ခက်တဲ့ နေ့တွေ တရက်ထက် တရက် များလာရင်တော့
အစာမကြေတာတွေ ဘာတွေ တွေးမနေနဲ့…
ရေးဖို့ရှိနေတဲ့ ကဗျာတွေ တပုဒ်ပြီး တပုဒ်…
အစာမကြေခြင်း အကြောင်းပြောရရင်တော့ တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်ကတောင် အရှုံးပေးရမှာ..
ဘဝကို ရောမမှာ ရောမလိုကျင့်ရင်း ဖြတ်သန်းနေခဲ့ရတဲ့ကာလတွေ..
ဒီကြားထဲ ဇာတ်တူသားစား.. ဂုတ်သွေးစုတ်သူတွေကလည်းရှိသေး..
ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်..
Very right..mite tal kor...